Cadaynta laysarka gooyay shaashadda birta qurxinta xardhay
Qalab Aluminium xaashida, xaashida birta ah, birta korten
Cabbirka cabbirka habaysan
Max. cabbirka 1800mm*6000mm
Daaweynta Dusha sare Daahan budada ah, PVDF
Midabka Midab kasta oo RAL ah ee doorashadaada
Qaabka (naqshad) Nidaam kasta oo aan u habeyn karno sida baahidaada tahay
Codsiga laysarka gooyay shaashadda birta qurxinta xardhay
1. Qurxin kasta oo gudaha ah oo loo isticmaalo qurxinta gudaha, sida asalka TV-ga, albaabka golaha, qaab-dhismeedka, jir, dusha alaabta guriga, gidaarka saqafka, iwm.
2. Darbiyada asalka ah ee TV-ga, fadhiga, sariirta, hoolka hore, jaranjarada, qolka carruurta, waxbarashada iyo wixii la mid ah.
3. Saadaasha sawirka shirkadda, qolka shirarka, makhaayadda shaaha, dhammaan noocyada dukaamada silsiladaha, hudheelada, makhaayadaha, qurxinta gidaarka asalka ah ee xanaanada.
4. Darbiga saldhiga, wharf, qolka VIP garoonka, gidaarka garoonka, shineemo, studio sound, shineemo, istuudiyaha TV-ga, dhismaha xafiisyada dawlada iyo qurxinta goobaha kale ee dadweynaha.
Adeegyadayada iyo faa'iidooyinka
1. Khibrad ganacsi oo caalami ah oo ku jirta 3D MDF ee gidaarka xardhan.
2. Kooxda iibka xirfadlayaasha ah si ay u bixiyaan adeegyo tayo leh.
3. Adeegga iibka ka dib oo aad u fiican, oo ku habboon iskaashiga muddada dheer, laakiin maaha shaqo hal mar ah.
4. Mas'uul ka ah dhibaatooyinka tayada ee habka wax soo saarka
5. Samee xakamaynta tayada adag oo sii warbixinta xakamaynta tayada macaamiisha ka hor inta aan la keenin.
6. Bixi muunado badeecado cusub fursadda ugu horreysa si aad ula qabsato suuqa.
Ka jawaab dhammaan iimaylada 24 saacadood gudahood.
8. Gaadhida degdega ah sidii ballanku ahaa.
9.Dhammaan alaabtayadu waxay la kulmaan heerarka dalal kala duwan
Hore: Mesh birta galvanized kulul cawska mesh Kraal mesh
Xiga: Dheeman balaariyay mesh aluminium ah oo loo adeegsaday qurxinta dhismaha